सोसल मिडियाबाट यसरी कमाउन सकिन्छ पैसा - अवसर - साप्ताहिक
इन्स्टाग्राम युवा–युवतीबीच लोकप्रिय छ । विशेषगरी फोटो पोस्टका लागि चर्चित यो एपमा विभिन्न स्वदेशी तथा कम्पनीले विज्ञापन दिँदै आएका छन् । तपाईंको आफ्नै नाममा खोलिएको इन्स्टाग्राम एकाउन्ट होस्, वा कुनै क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै खोलिएको एकाउन्ट होस्, राम्रोसँग चलाउन सकियो भने यसबाट पैसा आर्जन गर्न सकिन्छ । सेलिब्रिटीहरूले यसमा आफ्नो पोस्ट संख्या अनुसार पैसा लिने गरेका छन् । आफूले पोस्ट गरेको फोटोले अत्यधिक लाइक्स बटुल्छ भने स्वयं विज्ञापनदाताहरूले तपाईंसँग सम्पर्क गर्न सक्छन् वा आफैं पनि विज्ञापनदातासँग सम्पर्क गर्न सकिन्छ । पहिले–पहिले फोटो मात्र अपलोड गर्न मिल्ने इन्स्टाग्राममा अचेल भिडियो समेत अपलोड गर्न सकिन्छ । काठमाडौंका विवेक लामिछानेले इन्स्टाग्राममा पढन्ते एकाउन्ट खोलेको धेरै भएको छैन । लामिछाने उक्त एकाउन्टमार्फत नयाँ–नयाँ पुस्तकको व्यापार गर्छन् । काठमाडौं उपत्यकाभित्र नि:शुल्क पुस्तक डेलिभरी दिँदै आएका विवेकले इन्स्टाग्राममार्फत गरेको पुस्तक व्यापारले राम्रो बजार लिइरहेको छ ।
यदि तपाईं फेसबुकबाट पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईंसँग धेरै लाइक्स भएको पेज हुन जरुरी छ । यदि आफ्नो एकाउन्टमा नै धेरै लाइक्स आउँछ, रिच धेरै नै छ भने त्यसबाट पनि पैसा कमाउन सकिन्छ । कति कमाई हुन्छ भन्ने कुरा पेजको लाइक्सका आधारमा हुन्छ । बिभिन्न ब्रान्डले फेसबुकमार्फत विज्ञापन गरिरहेका हुन्छन् । पेजहरूले लाइक्स, कमेन्ट तथा सेयरिङका आधारमा पैसा लिने गरेका छन् । नेपाली व्यवसायीहरूले पनि फेसुबकका लागि पनि पैसा छुट्याउने गरेका छन् । केही सेलिब्रिटीले पोस्ट अनुसार पैसा लिने गरेका छन् । तपाईंले कुन क्षेत्रमा व्यापार गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ ? खानपान, मनोरन्जन, विज्ञान तथा प्रविधि जुन क्षेत्रलाई लक्ष्य राखिएको त्यही क्षेत्रका विषयवस्तु राखेर पेज चलाउने तथा क्रमश: लाइक्स बढाउने । अब त्यही आधारमा आफ्नो ब्यापार बढाउन सकिन्छ ।
युट्युबका प्रयोगकर्ताको संख्या नेपालमा पनि दिनानुदिन बढ्दै गएको गएको छ । रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका भन्दा युट्युब हेर्नेहरूको संख्या तीव्र गतिमा बढ्दै गएको पाइन्छ । रेडियो, टेलिभिजनमा प्रसारण भएका कार्यक्रम एक पटक हेरेपछि दोहोर्‍याएर सुन्न– हेर्न मिल्दैन तर युट्युबमा भने जुनसुकै बेला पनि हेर्न वा सुन्न, फरवार्ड वा ब्याक गर्न, सेभ गर्न, साथीहरूलाई पठाउन सकिन्छ । यही सहजताका कारण पनि यसका प्रयोगकर्ता बढ्दै गएका हुन् । यदि युट्युबमा तपाईंको एकाउन्ट छ भने यसमार्फत पैसा समेत आर्जन गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि तपाईंको च्यानल मोनिटाइज हुन जरुरी छ । सन् २०१८ पछि युट्युबले केही नियम परिवर्तन गरेको छ । तपाईंले नयाँ जिमेल एकाउन्टमार्फत कुनै च्यानल खोलेपछि सुरुमा कम्तीमा १ हजार सब्सक्राइब र भिडियोहरू चार घण्टा हेरिएपछि मात्र च्यानल मोनिटाइज हुन्छ । त्यसपछि मात्र भ्युजका आधारमा कमाई सुरु हुन्छ । आफूले अपलोड गरेका भिडियो बाहेक कुनै कम्पनीका प्रमोसनल भिडियो बनाएर पनि कमाई गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि सुरुमा आफ्नो च्यानलको पहिचान बलियो बनाउन जरुरी छ । कुन क्षेत्रमा काम गर्ने हो ? खेलकुद, खानपान, मनोरन्जन, विज्ञान तथा प्रविधि ? स्पष्ट भएर काम गर्नु अझ प्रभावकारी हुन्छ ।
ट्वीटर नेपालमा त्यति कमर्ससियल भैसकेको छैन । ट्वीटर फेसबुक जति लोकप्रिय पनि छैन । यसमा कुनै कम्पनी वा ब्रान्डको आधिकारिक ट्वीटर एकाउन्ट म्यानेज गरेर काम गर्न सकिन्छ । सोसल मिडिया म्यानेजरका रूपमा बिभिन्न कम्पनी, संघ–संस्थाहरूमा काम गर्न सकिन्छ ।
त्यसबाहेक यसरी पनि कमाउन सकिन्छ :
यदि तपाईं फोटोग्राफीमा रुचि राख्नुहुन्छ र राम्रा–राम्रा तस्बिर खिच्नुभएको छ भने त्यसैलाई बेचेर पनि आम्दानी गर्न सकिन्छ । तस्बिर डिएसएलआर क्यामेरा वा कुनै महँगै क्यामेराले खिचेको हुनुपर्छ भन्ने छैन । यदि फोटाग्राफी कला छ भने मोबाइलले खिचेकै तस्बिर पनि बिक्री गर्न सकिन्छ । मोबाइलमा VSCO एप डाउलोड गर्नुभयो र यसबाट फोटो खिच्नुभयो भने राम्रो खालका तस्बिर लिन सकिन्छ । यसरी खिचिएका तस्बिरलाई फ्लीकरमा अपलोड गर्न सकिन्छ । त्यस्तै स्न्यापवायर, मोबाइलप्रिन्ट्स तथा Twenty20 मा आफ्नो पोर्टफोलियो क्रिएट गरेर खिचिएका तस्बिर अपलोड गर्ने हो भने इच्छुकहरूले खरिद गर्न सक्छन् । यद्यपि त्यसका लागि समय, शक्ति खर्चिनुपर्ने हुन्छ । आफूमा लेख्ने कला छ भने सोसल मिडिया कन्टेन्ट राइटरका रूपमा समेत काम गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा कसका प्रयोगकर्ताहरू कति ?